ဓမ္မဒူတ(ကိုရီးယား)၏ ဆောင်ရွက်မှုများကို မှတ်တမ်းတင် ဖော်ပြသွားပါမည် ။
အင်ချောန်း ၊ မေ ၉
ကိုရီးယားနိုင်ငံရောက် မြန်မာ အလုပ်သမားများ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုကို အထောက်အကူဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်လျက် ၊ ဓမ္မဒူတဗုဒ္ဓဘာသာအသင်းနှင့် ကိုရီးယား ဂျိုဂဲ ဂွမ့်ဂန်ဂျောင်ဆာ ဗုဒ္ဓဘာသာအသင်းတို့ ညှိနှိုင်းချက်အရ ၊ ကိုရီးယားအစိုးရအသိအမှတ်ပြု စားဖိုမှူး သင်တန်းကို အောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်း ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသူများ အခမဲ့ တက်ရောက်သင်ယူနိုင်ပါကြောင်း သတင်းကောင်း ပါးအပ်ပါသည် -
- တနင်္ဂနွေ တစ်ပတ်ခြား (တစ်လ၂-ရက်)
- နံနက် ၉ နာရီ ၃၀ မှ ညနေ ၄ နာရီထိ
- နေ့လည်စာ အခမဲ့ ကျွေးမွေးပါမည် ။
- နံနက် ၈ နာရီတိတိတွင် ဓမ္မဒူတ(ကိုရီးယား)မှ ကြိုပို့ကား ထွက်ခွါပါမည် ၊ သင်တန်းချိန်ပြီးပါက ဓမ္မဒူတသို့ ပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးပါမည် ။
- ထိရောက်စွာ ပို့ချ ၊ သင်ယူနိုင်ကြစေရန် သင်တန်းသား ဦးရေ ကန့်သတ်ထားပါသည် ။
- အမှန်တကယ်တတ်မြောက်လိုသူများ နစ်နာမှုမရှိစေရေးနှင့် သင်တန်းစီစဉ်သူများ အနှောက်အယှက် မဖြစ်စေရေးအတွက် အမှန်တကယ်တက်ရောက်နိုင်မှသာ အမည်စာရင်းပေးသွင်းပါရန်မေတ္တာရပ်ခံပါသည် ။
- မိမိဦးစားပေးသင်ယူလိုသော (အချက်အပြုတ်) အမျိုးအမည်များအဆိုပြုနိုင်ပါသည် ။
- စိတ်ပါဝင်စားသူများ မေလ၂၀ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထားပြီး 010-2331-2457 ထံ စာရင်းပေးသွင်းကြရန် ဖြစ်ပါသည် ။
Posted by ကိုဝိုင်း(မိုးညှင်း) at 8:18 AM No comments:
Labels: သင်တန်း, သတင်းစုံ, မောင်းသတင်း
၄၃၄၆-ခုနှစ် ၊ ကိုရီးယားနှစ်သစ်ကူး ဓမ္မသဘင် ၊ ဆရာတော် ဒေါက်တာအရှင်ဆေကိန္ဒ ကြွရောက်ချီးမြှင့်မည်
ဖေဖေါ်ဝါရီ ၇ ၊ အင်ချောန်း ။
ကိုရီးယားနှစ်- ၄၃၄၆-ခုနှစ် ကိုရီးယားနှစ်သစ်ကူးအခါသမယ (၂၀၁၃-ခုနှစ်ဖေဖေါ်ဝါရီလ၉ နှင့် ၁၀ ရက်များ) တွင် ၊ ကိုရီးယားနိုင်ငံရောက် မြန်မာညီအစ်ကိုမောင်နှမများအတွက် ၊ အထူးဓမ္မသဘင် ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ၊ ဓမ္မသဘင်သို့ ဓမ္မဒူတဆရာတော် ဒေါက်တာ အရှင်ဆေကိန္ဒ ကြွရောက်ချီးမြှင့်တော်မူမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည် ။
ဆရာတော် ဒေါက်တာ အရှင်ဆေကိန္ဒ ၏ ၊ ၄၃၄၆-ကိုရီးယားနှစ်သစ်ကူး ဓမ္မဒူတအစီအစဉ်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် -
- နံနက် ၈ နာရီ ၂၅ မိနစ်တွင် ကိုရီးယားသို့ ရောက်ရှိတော်မူမည် ။
- နေ့လယ် ၁၁ နာရီ၁၅ မိနစ်တွင် ၊ ဂုံဂျီအမ်လူငယ်များမှ လှူဒါန်းမည့် နေ့ဆွမ်းအလှူကို ချီးမြှောက်တော်မူပြီး ၊ သာဓုအနုမောဒနာ(ရေစက်ချ) တရား ချီးမြှင့်တော်မူပါမည် ။
- ညနေ ၆ နာရီ ၃၀ မိနစ်အချိန်တွင် ၊ ဓမ္မဒူတစင်တာတွင် ၊ ကိုရီးယားနှစ်ကူးညချမ်းတရားဆွေးနွေးပွဲ (မေး ၊ဖြေ)ကျင်းပပါမည် ။
၂၀၁၃-ခုနှစ်ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁၀ ရက်(တနင်္ဂနွေနေ့) အစီအစဉ်
- နံနက် ၆ နာရီ ၄၅ မိနစ်တွင် ဓမ္မဒူတ (ကိုရီးယား) လူငယ်များ ၏ အရုဏ်ဆွမ်းအလှူ ၊ နေ့လယ် ၁၁ နာရီ၁၅ မိနစ်တွင် ပဲခူး လူငယ်များ၏ နေ့ဆွမ်းအလှူတို့ကို ချီးမြှင့်တော်မူပါမည် ။
- နေ့လည် ၁ နာရီ ၁၅မိနစ် မှ နေ့လည် ၃ နာရီထိ ကိုရီးယားနှစ်သစ်အထူးဓမ္မသဘင်တွင် ဓမ္မလက်ဆောင်များ ဟောကြားချီးမြှင့်တော်မူပါမည် ။
- ညနေ ၃ နာရီ ၃၀ မိနစ်တွင် ၊ ကိုရီးယားမှ မြန်မာပြည်သို့ ပြန်လည် ကြွချီတော်မူပါမည် ။
ဗုဒ္ဒသာသနံ စိရံတိဋ္ဌတု ။
Posted by ဓမ္မဒူတ(ကိုရီးယား) at 7:36 AM No comments:
Labels: ဖိတ်စာ, သတင်းစုံ, မောင်းသတင်း
ခရာစ်နှစ်-၂၀၁၃ခုနှစ်ဖေဖေါ်ဝါရီလ၉,၁၀,၁၁ ရက် (မြန်မာရက် ၁၃၇၄ခုနှစ် ပြာသိုလပြည့်ကျော် ၁၄ ၊ ၁၅ နှင့် တပို့တွဲလဆန်း ၁ ရက်) နေ့တွင်များတွင်ကျရောက်သည့် ကိုရီးယားနှစ်- ၄၃၄၆ခုနှစ် နှစ်သစ်ကူးအခါသမယတွင် ၊ ကိုရီးယားနိုင်ငံရောက် မြန်မာညီအစ်ကိုမောင်နှမများက ၊ ဓမ္မဒူတစင်တာ(ကိုရီးယား) တွင် အောက်ပါအစီအစဉ်များအတိုင်း၊ အာဟာရဒါန လှူဒါန်းကြမည်ဖြစ်ရာ ၊ ကြွရောက် သုံးဆောင်တော်မူကြခြင်းဖြင့် ကုသိုလ်တော် ယူတော်မူကြပါရန် လေးစားစွာ ဖိတ်မန္တကပြုအပ်ပါသည် -
အရုဏ်ဆွမ်းအလှူရှင် - ဂုံဂျီအမ်လူငယ်များ
အာဟာရ - မြန်မာမုန့်ဟင်းခါး
နေ့ဆွမ်းအလှူရှင် - ဂုံဂျီအမ်လူငယ်များ
အာဟာရ - မြန်မာထမင်း မြန်မာဟင်း
၂၀၁၃-ခုနှစ်ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁၀ ရက်(တနင်္ဂနွေနေ့)
အရုဏ်ဆွမ်းအလှူရှင် - ဓမ္မဒူတ (ကိုရီးယား) လူငယ်များ
အာဟာရ - ရှမ်းခေါက်ဆွဲ (ရှယ်ထူး)
နေ့ဆွမ်းအလှူရှင် - ကိုရဲ ၊ ကိုထွန်းဇော် ၊ ဖိုးလှမင်း ၊ ကိုသော်သော် ၊ ကိုနေအောင် ၊ ကိုဝင်းကို နှင့် ချင်းကူများ
အာဟာရ - ပဲခူးထမင်း နှင့် ပဲခူးရိုးရာ ဟင်း
၂၀၁၃-ခုနှစ်ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁၁ ရက်(တနင်္လာနေ့)
အရုဏ်ဆွမ်းအလှူရှင် - မြန်မာသူကြီး နှင့် မြိတ်လူငယ်များ
အာဟာရ - မြိတ်အာဟာရ
နေ့ဆွမ်းအလှူရှင် - မြန်မာသူကြီး နှင့် မြိတ်လူငယ်များ
အာဟာရ - သူကြီးထမင်း သူကြီးဟင်း
Posted by ဓမ္မဒူတ(ကိုရီးယား) at 6:46 AM No comments:
Labels: ကထိန်အလှူတော်, အလှူတော်မော်ကွန်း, မောင်းသတင်း
ဓမ္မဒူတ ဆောင်းရာသီ ရေခဲတောင် အပမ်းဖြေခရီး လိုက်ပါမည့် ညီအစ်ကိုမောင်နှမများထံသို့
ဇန္နဝါရီ ၁၂ ၊ အင်ချောန်း ။
ဓမ္မဒူတဗုဒ္ဓသာအသင်း (ကိုရီးယား) အနေဖြင့် ၂၀၁၃-ခုနှစ် ၊ ဆောင်းရာသီ ရေခဲတောင် အပမ်းဖြေခရီးအဖြစ် မနက်ဖြန် ဇန္နဝါရီလ ၁၃ ရက်နေ့တွင် ဂန်ဝေါန်ဒို (Ganweon Do) သို့ ထွက်ခွါရန် စီစဉ်ထားပါသည် ။
အဆိုပါ မေတ္တာခရီးစဉ်လိုက်ပါရန် အမည်စာရင်းပေးသွင်းထားသူများ မနက်ဖြန် (ဇန်-၁၃) နံနက် ၇ နာရီခွဲ အချိန် ၊ ဓမ္မဒူတ (ကိုရီးယား)သို့ မပျက်မကွက် ကြွရောက်ကြပါရန် လေးစားစွာ မေတ္တာရပ်ခံ အသိပေးအပ်ပါသည် ။
နံနက် ၇နာရီ ၄၀ မိနစ် တိတိတွင် ကားများစတင်ထွက်ခွါပါမည် ။
အမည်စာရင်းပေးထားပြိး ၊ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် လိုက်ပါခြင်း မပြုနိုင်သူများ ၊ ယနေ့ည ၈ နာရီ နောက်ဆုံးထားပြီး ကြိုတင် အသိပေးကြပါရန်လည်း ထပ်လောင်း၍ မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။
Posted by ဓမ္မဒူတ(ကိုရီးယား) at 1:34 PM No comments:
ပဲကြီးနှပ်ကွပ် (동지팥죽) ချက်နည်းသင်တန်း ဖိတ်ခေါ်စာ
အင်ချောန်း ၊ ဒီဇင်္ဘာလ ၁၄
ကိုရီးယားနိုင်ငံရောက် မြန်မာ အလုပ်သမားများ၏ လူနေမှုဘဝနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုတို့အတွက် တစ်ဖက်တစ်လှမ်းမှ အထောက်အကူဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်လျက် ၊ ဓမ္မဒူတဗုဒ္ဓဘာသာအသင်းနှင့် ကိုရီးယား ဂျိုဂဲ ဂွမ့်ဂန်ဂျောင်ဆာ ဗုဒ္ဓဘာသာအသင်းတို့ ညှိနှိုင်းချက်အရ ၊ ပဲကြီးနှပ်ကွပ် လက်တွေ့ ချက်ပြုတ်နည်း (동지팥죽 만들기) သင်တန်းကို အောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်း ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသူများ အခမဲ့ တက်ရောက်သင်ယူနိုင်ပါကြောင်း သတင်းကောင်း ပါးအပ်ပါသည် -
- ဂျိုဂဲဂိုဏ်း ၊ ဂွမ့်ဂန်ဂျောင်ဆာ (금강정사)
- ဒီဇင်္ဘာလ ၂၃ ရက် ၊ တနင်္ဂနွေနေ့
- စိတ်ပါဝင်စားသူများ 010-2331-2457 ထံ ဒီဇင်္ဘာလ ၂၀ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထားပြီး စာရင်းပေးသွင်းကြရန် ဖြစ်ပါသည် ။
Posted by ဓမ္မဒူတ(ကိုရီးယား) at 5:22 AM No comments:
Labels: ဖိတ်စာ, ဘဝနေနည်း, မောင်းသတင်း
ဒုတိယအကြိမ် ကိုရီးယားရိုးရာ ကင်ချီလက်တွေ့ ပြုလုပ်နည်းသင်တန်း မှတ်တမ်းပုံများ
Posted by ဓမ္မဒူတ(ကိုရီးယား) at 12:44 AM No comments:
Labels: ဘဝနေနည်း, သင်တန်း, သတင်းစုံ, မောင်းသတင်း
ဒုတိယအကြိမ် ကိုရီးယားကင်ချီ လက်တွေ့ပြုလုပ်နည်း သင်တန်းဖွင့်မည်
အင်ချောန်း ၊ နိုဝင်္ဘာလ ၁၄
ကိုရီးယားနိုင်ငံရောက် မြန်မာ အလုပ်သမားများ၏ လူနေမှုဘဝနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုတို့အတွက် တစ်ဖက်တစ်လှမ်းမှ အထောက်အကူဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်လျက် ၊ ဓမ္မဒူတဗုဒ္ဓဘာသာအသင်းနှင့် ကိုရီးယား ဂျိုဂဲ ဂွမ့်ဂန်ဂျောင်ဆာ ဗုဒ္ဓဘာသာအသင်းတို့ ညှိနှိုင်းချက်အရ ၊ ဒုတိယအကြိမ် ကင်ချီလက်တွေ့ ပြုလုပ်နည်းသင်တန်းကို အောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်း ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသူများ အခမဲ့ တက်ရောက်သင်ယူနိုင်ပါကြောင်း သတင်းကောင်း ပါးအပ်ပါသည် -
- နိုဝင်္ဘာလ ၂၅ ရက် ၊ တနင်္ဂနွေနေ့
- စိတ်ပါဝင်စားသူများ 010-2331-2457 ထံ နိုဝင်္ဘာလ ၂၀ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထားပြီး စာရင်းပေးသွင်းကြရန် ဖြစ်ပါသည် ။
Posted by ဓမ္မဒူတ(ကိုရီးယား) at 6:58 PM No comments:
၁၃၇၄ခုနှစ် ၊ ဓမ္မဒူတ စုပေါင်း မဟာဘုံကထိန် အလှူတော် ဖိတ်ကြားလွှာ
နမောဗုဒ္ဓါယ ၊ နမောဓမ္မါ ယ ၊ နမောသံဃာယ ၊
ရတနာသုံးပါး ဦးထိပ်ပန်ဆင်လျက် ၊ ဗုဒ္ဓသာသနာ ကြာရှည်တည်တံ့ပါစေခြင်း အလို့ငှာ၊ ဓမ္မဒူတ (ကိုရီးယား) အကျိုးဆောင် အဖွဲ့၏ ဦးဆောင်မှု၊ အမေ့အိမ် ရွှေညီအစ်ကိုများ၏ အာဟာရဒါန လှူဒါန်းမှု ကိုရီးယားနိုင်ငံရောက် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် သဒ္ဓါကြည်ရွှင် သူတော်စင် အပေါင်းတို့၏ ပါဝင်လှူဒါန်းမှုတုို့ဖြင့် စုပေါင်းကျင်းပမည့် ၁၃၇၄ခုနှစ် ဓမ္မဒူတ စုပေါင်းမဟာဘုံကထိန် အောင်ပွဲအလှူတော်ကို အောက်ဖော်ပြပါ အစီအစဉ်အတိုင်း စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပပြုလုပ်မည် ဖြစ်ပါသဖြင့် ကြွရောက်ကြပါရန် ရပ်နှီးရပ်ဝေးရှိ ရွှေမြန်မာများအပေါင်းတုို့အား လေးစားစွာ အသိပေး ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်-
၁၃၇၄ခု၊ တန်ဆောင်မုန်းလဆန်း (၁၂)ရက်၊ (၂၅-၁၁-၂၀၁၂)၊ တနင်္ဂနွေနေ့
နံနက် (၁၀) နာရီမှ နေ့လည် (၂)နာရီအထိ
နေ့လည် (၁) နာရီ
အထူးစပါယ်ရှယ် မြန်မာ့ရိုးရာ အမေ့အိမ် ထမင်းဟင်း
Posted by ဓမ္မဒူတ(ကိုရီးယား) at 4:45 AM No comments:
Labels: ကထိန်အလှူတော်, ဖိတ်စာ, မောင်းသတင်း
စစ်ရေးပဋိပက္ခတွေကြောင့် ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့ ကချင်ပြည်နယ် ဒေသခံပြည်သူတွေကို ဓမ္မဒူတဆရာတော် ဒေါက်တာ အရှင်ဆေကိန္ဒက ဆန်၊ ဆီ၊ ဆား၊ ဆေးဝါး၊ စောင်နဲ့ အလှူငွေအပါအဝင် စုစုပေါင်းငွေကျပ် သိန်း ၁ ထောင်ကျော်ဖိုး မနေ့က လှူဒါန်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ နေ့လည် ၁ နာရီက မြစ်ကြီးနားမြို့ မြို့တော်ခန်းမမှာကျင်းပတဲ့ ပူတာအိုနဲ့မြစ်ကြီးနားခရိုင်က စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက္ကသိုလ် ပဋိပတ္တိမဟာဋ္ဌာန ဋ္ဌာနမှူး ပါမောက္ခဆရာတော် အရှင်ဆေကိန္ဒနဲ့ တပည့်ဒါယိကာ၊ ဒါယိကာမတွေ စုပေါင်းလှူဒါန်းတဲ့ အခမ်းအနားမှာ ကချင်ပြည်နယ် သာသနာရေးဦးစီးဋ္ဌာန ဦးစီးမှူး ဦးစိုးတင့်က လှူဒါန်းတဲ့စာရင်း အသေးစိပ်ကို ကြေငြာခဲ့ပါတယ်။ ဒီအခမ်းအနားမှာ ဆရာတော်အရှင်ဆေကိန္ဒက ကချင်ပြည်နယ်မှာ စစ်ပွဲတွေရပ်စဲရေးအတွက် မေတ္တာတရားဟောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဆရာတော်ဟာ ကချင်ပြည်နယ် ဝိုင်းမော်မြို့နယ် သာဂရသရက်တော ဘုန်းတော်ကြီး ကယ်ဆယ်ရေးစခန်း၊ ချမ်းမြေ့သီလရှင်စာသင်ကျောင်းနဲ့ မိုင်းနားကျေးရွာက စိန့်ဂျိုးဇက် ကက်သလစ် အသင်းတော် ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေကိုလည်း မနေ့က သွားရောက်ပြီး အဲဒီ့စခန်းတွေက ကလေး လူကြီးအားလုံးကို ငွေကျပ် ၁ ထောင်စီ ထပ်လောင်းလှူဒါန်းခဲ့တယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။ ဆရာတော်ဟာ ဒီခရီးစဉ်အတွင်း အံတော်ရှင်ဘုန်းတော်ကြီးစာသင်ကျောင်း၊ ဝန်းသိုကျောင်းတိုက် ကယ်ဆယ်ရေးစခန်း နဲ့ Green Happy Land မိဘမဲ့ကျောင်းတို့ကို သွားရောက်မယ်လုိ့လည်း သတင်းရရှိပါတယ်။
Posted by ဓမ္မဒူတ(ကိုရီးယား) at 7:07 PM No comments:
Labels: သတင်းစုံ, အလှူတော်မော်ကွန်း, မောင်းသတင်း
ကြာကျန်းမြောင်(ပဲခေါက်ဆွဲ) သင်တန်း ပြီးဆုံး
၂၀၁၂ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၂၈ ကြာကျန်းမြောင် (ပဲခေါက်ဆွဲ)သင်တန်းမှတ်တမ်းပုံများ (ဓါတ်ပုံ-ကိုကိုဇာနည်)
Posted by ဓမ္မဒူတ(ကိုရီးယား) at 11:54 PM No comments:
Labels: သင်တန်း, သတင်းစုံ
No 534-155, (3rd & 4th Floor) Bupyeong 1 Dong, Bupyeong Gu, Incheon City, R.O.K (403-011)
Tel: 032-521-5586, Fax:032-521-5587, Email:dhammaduta.k@gmail.com
အင်ချောန်း ၊ မေ ၉ ကိုရီးယားနိုင်ငံရောက် မြန်မာ အလုပ်သမားများ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုကို အထောက်အကူဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်လျက် ၊ ဓမ္မဒူတဗုဒ္ဓဘာသာအသင်းန...
2012-11-01 စစ်ရေးပဋိပက္ခတွေကြောင့် ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့ ကချင်ပြည်နယ် ဒေသခံပြည်သူတွေကို ဓမ္မဒူတဆရာတော် ဒေါက်တာ အရှင်ဆေကိန္ဒက ဆန်၊ ဆီ၊ ဆား၊...
အင်ချောန်း ၊ နိုဝင်္ဘာလ ၁၄ ကိုရီးယားနိုင်ငံရောက် မြန်မာ အလုပ်သမားများ၏ လူနေမှုဘဝနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုတို့အတွက် တစ်ဖက်တစ်လှမ်းမှ အထောက်အက...
၄၃၄၆-ခုနှစ် ၊ ကိုရီးယားနှစ်သစ်ကူး ဓမ္မသဘင် ၊ ဆရာတော် ဒေါက်တာအရှင်ဆေကိန္ဒ ကြွရောက်ချီးမြှင့်မည် ဖေဖေါ်ဝါရီ ၇ ၊ အင်ချောန်း ။ ကိုရီးယားနှစ်- ၄၃၄...
မလေးရှားအစိုးရကဦးစီး၍ ဗုဒ္ဓသာသနာမြေလှန်သုတ်သင်နေပုံကို မြန်မာမိတ်ဆွေများ ရှုစားနိုင်တော်မူကြပါရန် တင်ပြလိုက်ပါသည် ။ ဟောဒီမှာဗျို့
အင်ချောန်း ၊ ဒီဇင်္ဘာလ ၁၄ ကိုရီးယားနိုင်ငံရောက် မြန်မာ အလုပ်သမားများ၏ လူနေမှုဘဝနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုတို့အတွက် တစ်ဖက်တစ်လှမ်းမှ အထောက်အက...
ဇန္နဝါရီ ၁၂ ၊ အင်ချောန်း ။ ဓမ္မဒူတဗုဒ္ဓသာအသင်း (ကိုရီးယား) အနေဖြင့် ၂၀၁၃-ခုနှစ် ၊ ဆောင်းရာသီ ရေခဲတောင် အပမ်းဖြေခရီးအဖြစ် မနက်ဖြန် ဇန္နဝါရီလ ၁၃ ...
ဓမ္မဒူတ(ကိုရီးယား) ဗုဒ္ဓရုပ်ပွါးတော် ရောင်တော်ဖွင့် နှင့် မြန်မာနှစ်သစ်အလှူဖိတ်ကြားလွှာ
ဓမ္မဒူတ (ကိုရီးယား) တွင် တည်ထားကိုးကွယ်သည့် ဗုဒ္ဓရုပ်ပွါးတော် ရောင်တော်ဖွင့် နှင့် နှစ်သစ်အာဟာရအလှူတော် ကိုအောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်း ပြုလုပ်မည်ဖြစ...
လုပ်သက်ဆုကြေး (ပြည်ထွက်) အာမခံ ၊ အလုပ်သမားထံမှ ဖြတ်ရန်မဟုတ် - ကိုဝိုင်း(မိုးညှင်း) *လုပ်သက်ဆုကြေး (**퇴직금**)* ကိုရီးယားနိုင်ငံရောက် မြန်မာအလုပ်သမားတိုင်း ထွယ်ဂျစ်ဂွမ့် (퇴직금) ဆိုတာကို သိကြပြီးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ယူဆပါတယ...
ဂွမ်းဂျူးမှာလည်း ရွှေမြန်မာတို. အားထားရာ “မြန်မာကျောင်း”တစ်နေရာ တည်ထောင်ပါဦးမည်။ - တောင်ကိုရီးယားနိူင်ငံ ဖူဆန်းမြို.မှာ ဓမ္မယာန ပြည်တော်ဦး ကိုးရီးယားမြန်မာ ဗုဒ္ဓသာသနာ့ရိပ်မွန်ကို ၂၀၁၀ခု ၂လပိုင်း ၃ရက်နေ.မှာ စတင် တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ ကိုရီးယား လ...
Teletalki ချူးဆောက် မေတ္တာလက်ဆောင် ကတ်ဖုန်းရှင်မ်ကတ်(Prepaid USIM)များ ရယူနိုင်ကြပါပြီ - စက်တင်္ဘာ ၆ ၊ အင်ချောန်း ချူးဆောက် ပိတ်ရက် အထူး အစီအစဉ်အဖြစ် တယ်လီတော်ကီမိတ်သစ်မိတ်ဟောင်း အားလုံး အတွက် KT လိုင်း ကတ်ဖုန်းရှင်မ်(USIM) များကို မေတ္တာလက်ဆောင် အ...
သတ္တမအကြိမ် စုပေါင်းဝါဆိုသင်္ကန်း ဆက်ကပ်လှူဒါန်းပွဲအတွက် အရပ်ရပ် အလှူရှင်များစာရင်းတင်ပြခြင်း - သတ္တမအကြိမ် စုပေါင်းဝါဆိုသင်္ကန်း ဆက်ကပ်လှူဒါန်းပွဲအတွက် အရပ်ရပ် အလှူရှင်များစာရင်းတင်ပြခြင်း ..................................................................
Dhammaduta@Korea. Travel theme. Powered by Blogger.